Somaliland.Org » Somaliland Oo Cagta Saartay Dhabbadii Halista Iyo Golaha Guurtida Oo Maanta La Jiidhsiiyay Muddo Kordhin
March 28th, 2009 Comments Off Hargaysa (Somaliland.org)- Golaha Guurtida Somaliland ayaa maanta muddo lix bilooda u kordhiyay xukuumadda Madaxwayne Riyaale oo muddadii sharciga ahayd ee la doortay iyo sannadkii hore guurtidu u kordhisay dhamaadeen iyada oo aan la qaban doorashadii Madaxtootada.
Fadhiga Golaha Guurtida ee maanta oo uu guddoominayay guddoomiyaha golaha Guurtida Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan waxa madasha ku sugnaa 97 mudane oo uu ku jiro guddoomiyuhu, kuwaasi oo muddo kordhinta madaxwayne Riyaale ku meel mariyay 42 mudane oo ogolaaday iyo 35 mudane oo diiday muddo kordhinta, hal mudane ayaa ka aamusay, guddoomiyuhuna muu codayn.
Muddo kordhinta Madaxwayne Riyaale oo maanta Goluhu cod u qaaday laba jeer, kadib markii uu buuq iyo sawaxan hadheeyay hoolka golaha ayaa ah markii labaad ee golaha guurtidu sifo sharci darro ah ugu kordhiyo Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa oo ku fashilmay in ay dalka ka hirgeliyaan doorashadii Madaxtooyada.
Madaxwayne Riyaale ayaa dhawrkii maalmood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii uu u kasban lahaa xildhibaanada golaha Guurtida, kuwaasi oo uu shirar hoosaadyo uu la yeeshay iyo baayacaada codadka ay ilaa xalay soo shaac baxday.
Xarunta Golaha Guurtida ayaa maanta amaankiisa’aad loo adkeeyay waxaana labada dhinac laga xidhay jidka hor mara kaamboolka Baarlamaanka ilaa madaxtooyada, waxaana askar tikniko ku hubaysan iyo baabuurta booliska ee shabaqlaha ah la dhigay ishaarada dhakhtarka iyo wasaaradda Maaliyadda horteeda, kuwaasi oo dadka iyo gaadiidkaba ka hor joogsaday in ay maraan jidkaasi.
Muddo kordhinta golaha guurtidu meel mariyay ayaa u muuqata mid soo afjaraysa geedi socodkii dimuquraadiyadda iyo doorashooyinkii Somaliland, taas oo macnaheedu yahay in Jamhuuriyada Somaliland ay cagta saartay dhabadii halista, kana leexatay waddadii dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka.
Labada xisbi ee mucaaridka ah ee UCID iyo KULMIYE ayaa hore u sheegay in aanay aqbali doonin muddo kordhin dambe oo loo kordhiyo Madaxwayne Riyaale iyo ku xigeenkiisa oo mudada xilhayntoodu ku egtahay lixda bisha April ee sannadkan 2009.